01/03/2018 - Page 2 sur 5 -
Finoana : Nandray ny Evekan’i Douvres ny filoha Hery Rajaonarimampianina
Miatrika ny fihaonamben’ny fiangonana anglikana aty amin’ny ranomasimbe Indiana. Mandritra ny fandalovany eto Madagasikara,dia noraisin’ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha, ny talata 27 febroary lasa teo, ny Eveka anglikana an’i Douvres, …Tohiny
Mpiray tanàna nifamono : Efatra no maty
Lehilahy efatra no indray namoy ny ainy vokatry ny gidragidra niseho teo amin’ny samy mpiray tanàna tany Befotaka Atsimo ny alahady 25 febroary lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia niaraka nifety …Tohiny
Tsaralalàna : Jiolahy maty voatifitry ny polisy
Nirefodrefotra indray ny basy teny Tsaralalàna omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 02 ora tany ho any. Araka ny loharanom-baovao, dia jiolahy iray efa nahazoan’ny polisy fampilazam-baovao dieny mialoha no nifanenjehana, ary maty voatifitra teny an-toerana. …Tohiny
Mpandrindram-paritry ny HVM : Tsy matahotra hifaninana amin-dRajoelina sy Ravalomanana
Vonona ary efa vonona hiatrika fifidianana ny antoko HVM eto Analamanga, raha ny fanazavana izay nentin’ ny mpandrindram-paritry ny Hery vaovaon’i Madagasikara nandritra ny fivahinianany tao amin’ ny ON AIR Radio omaly tolakandro, Ndranto Rakotonanahary. …Tohiny
Niely be tokoa ny feo tato anatin’ny 24 ora fa misy andiana manamboninahitra mikotrika fanonganam-panjakana ka anisan’ny voatonona tamin’izany ny jeneraly Ravalomanana Richard, COMGN teo aloha. Azon’ny mpanao gazety tato amin’ny Triatra an-tariby ity manamboninahitra ...Tohiny